ရဲထွန်း၏ မှတ်တမ်း: 2007
“ ရသ ” ပျက်ရခြင်း အကြောင်း ...
ကျွန်တော်လဲ အလုပ်မအားသေးလို့ အသစ်တွေ မတင်ဖြစ်သေးဘူး .. လောလောဆယ် ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း ပြည်ခေတ္တရာသား ရဲ့ လက်ရာလေးကို ခံစား လိုက်ကြပါအုံး ....
ဒီဇင်ဘာမနက် သိပ်အေးလွန်းတဲ့ အတွက် ၊ သောင်းကျော်တန် ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ၊ သိန်းလေးဆယ်ကျော် laptop ရှေ့မှာ (ကြွားတာနော်… ကြွားတာ…) ကမ္ဘာရွာပြားကြီး အရပ်သို့ ၊ ဖိနပ်မပါပဲ ငါနင်းဖြတ်ခဲ့တယ်….။
လေ့လာချင်စဖွယ် internet ပေါ်ဝယ် ၊ ကြားမြင်သုတ international news နဲ့တကွ ၊ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ဤကမ္ဘာမြေတခွင် ၊ မှတ်သားဖွယ်ရာ online ပေါ်မှာ ၊ ကြည့်ရှု့တိုးပွား သုတများကာ ၊ ကျင့်ကြံကြိုးကုပ် အားထုတ်နေရမယ့် အစား ၊ သောက်မှတ်မရှိတဲ့ ငါ့အကြည့်က ၊ ဘလော့တွေဆီပဲ ရောက်မိတယ် ….။
ဘလော့တွေ လျှောက်ကြည့် ၊ ဘာတစ်ခုမှ သောက်ဖြစ်မရှိ (ကျုပ်မပါဘူးနော်…) ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဟုတ်ထင် ၊ စိတ်အလိုမကျ မပုတ်ချပြီး ၊ ပြဿနာကို အဖြေမရှာ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ ဆဲလာ ၊ ဒီတော့ကျုပ်က ၊ ပေါက်ကွဲဒေါသ စိတ်အချဉ်ပေါက်ရ ၊ ကဲချင်လေသမျှ ကျုပ်မဆဲတတ်တော့ ကဗျာပဲဆပ်ရတာပေါ့ ၊ ဘလော့တွေက အချိုးမပြောင်း ကျုပ်မတော့အာညောင်း ၊ မုန်းစရာကောင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီအကြောင်း ၊ ဘလော့တကာမှာ တွေ့လေတော့ ကျုပ်ပြောရပြီပေါ့…။ (အဟမ်း…. အဟမ်း….)
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပြည်သူတွေပါမှပါ ၊ ပြည်သူတွေမပါသ၍ ဒီမိုကရေစီဝေလာဝေး ၊ မူးကြောင်ကြောင်နဲ့ ဘလော့တွေ လျှောက်ရေး ၊ ပြည်သူတွေနားနဲ့ဝေး ၊ မင်းတို့လုပ်တဲ့ မီဒီယာ ၊ ပြည်သူတွေ အပျင်းပြေစရာ ၊ နားကလော်ယုံမှတစ်ပါး ၊ ပြည်သူတွေဝမ်းရေး ခက်လို့ ဘယ်မှာနိုင်ငံရေးလုပ်လဲ ၊ ပြည်သူတွေ နိုင်ငံရေး လုပ်ဖို့အရေး ၊ မင်းတို့ဒေါ်လာတွေ လာဝေပေး (ဒါဆိုငါလည်း လုပ်မယ်ဟေး…) ဒင်းတို့သွေးရူး သွေးတန်း လမ်းမပေါ်တက် သေးပန်းလဲ ၊ ဒီမိုကရေစီ ရမှာမဟုတ် ၊ မင်းတို့ဘလော့ပေါ် လက်စွမ်းပြ သေတောင် ဒီမိုကရေစီမရ ၊ သုံးမရတဲ့ထုံးနဲ့ နှလုံးမူချနေလို့ကတော့ ၊ မင်းတို့မသာပေါ်ယုံပေါ့…။ မင်းတို့ခေါ်တဲ့ နအဖ ၊ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ကို ကိုင်တွယ်ပြခဲ့တာ ၊ မသိလေရော့သလား ၊ ငယ်သေးလို့ မမှတ်မိရင် ၊ သမိုင်းကိုပြန်ကြည့် ၊ ဒါနဲ့များ လာလာချီသေး ၊ “ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး” ၊ မင်းတို့အဖေတွေက ပျင်းတောင်ပျင်းသေး ၊ ရွှေဝါရောင်မကလို့ စိန်ပြာရောင်လာလဲ ၊ ရိုင်ဖယ်ကိုတော့ မနိုင်ပေါင်…။
မင်းတို့သုံးတဲ့ ဂျင်ကလိနဲ့ ရိုင်ဖယ်ကျဉ်ကို လာမတုနဲ့ ၊ သောက်ရူးဖြစ်သွားမယ် ၊ ခုဘလော့ပေါ် ကြိုက်သလောက်ရမ်း ၊ ဒီမြေပေါ်လာမသရမ်းနဲ့ ၊ စစ်ဖိနပ်နဲ့ မျက်နှာအပ်မိမယ် ၊ မင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ ခွပ်ဒေါင်း ၊ ရိုင်ဖယ်ကျဉ်အကြောင်း သိပါတယ်။ ဒီမယ် ဒေါင်းစုတ် ၊ သရဲကောင်း မလုပ်နဲ့ ၊ ရိုင်ဖယ်နဲ့တွေ့ရင် ၊ လဒကင် ဖြစ်မယ်။ စစ်ဖိနပ်အောက် ဒေါင်းမွေးမကပ်ရအောင် ၊ ဂျောင်ကပ်ပြီးလဲ မကုပ်နဲ့ ၊ ( H5N1 ) တုပ်လိမ့်မယ် ။ အီရတ်ကို အားကျ ၊ အမေရိကန်လာချမှ ဒီမိုကရေစီရမယ့် အိမ်မက် ၊ မင်းတို့ဒီတစ်သက် သေတောင်မမက်နဲ့။ ရှေးမူကိုမပြောင်း ၊ ဒီအတိုင်း ဂျောင်းနေလို့တော့ ၊ ထပ်စောင့်လိုက် အနှစ်(20) ၊ မင်းတို့မငယ်ပါဘူး.....။
ကျုပ်သဘော အမှန်ကိုပြောရလျှင် ၊ အကျိုးမရှိတဲ့ ခုလုပ်ရပ် ရပ်တန်းကရပ်လို့ ၊ အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်း ဒီနိုင်ငံကောင်းစားရေး ၊ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းပေးပြီး ၊ ပြည်သူတွေအကျိုး အစွမ်းရှိသယ်ပိုးလို့ ၊ ကိုယ်လိုရာဆန္ဒ ၊ ပြည့်ဝအောင် လုပ်ပါလား။ ဒီလိုမလုပ် ခုလိုရှုပ်နေရင် ၊ အစိုးရနဲ့ မလိုက်လျှော ငြင်းဆန်ကော နေမယ့်အစား ၊ မင်းတို့လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအိမ်မက် ၊ မြင်မက်ခွင့်ရရေး ၊ အစိုးရကို မျက်နှာချိုသွေး ၊ သူတို့အလိုကျ လုပ်မပြနိုင်ရင်တောင်မှ ၊ သူတို့ကြည်ဖြူဖို့အရေး မင်းတို့ကြံဆတွေးလို့ ၊ မေတ္တာသုတ်သာ ရွတ်နေပါ…။
ခုတော့ငါပြောမကောင်း ၊ ဒီဆောင်းမနက်ရဲ့ ၊ သောင်းကျော်တန် ကော်ဖီတစ်ခွက် ၊ ဒင်းတို့ကြောင့် အရသာပျက်ရပြီ…..။ ( သွန်ပစ်လိုက်ပြီ … ဟီးဟီး )
ယနေ့နိုင်ငံတကာ အခြေအနေကို လေ့လာပါက တစ်ဦးတည်းသော မဟာအင်အားကြီး (Solo Super Power) နိုင်ငံမှ မဟာအင်အားလွန် နိုင်ငံ (Hyper Power) အဆင့်သို့ တက်လှမ်းနေသည့် အမေရိကန်သည် တစ်လောကလုံး အရေးသည် ၄င်း၏ အရေးဟု မှတ်ယူကာ မည်သည့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ၊ ပြဌာန်းချက်၊ စာချုပ် စာတမ်းများကိုမှ အလေးမထားဘဲ မလိုလျှင် မလိုသလို အင်အားသုံး ပါဝင်စွက်ဖက်ကာ ဗိုလ်ကျ စိုးမိုးရေး ၀ါဒ ( Hegemonism ) ကိုလက်ကိုထားပြီး ( Unilateralism ) ၀ါဒဖြင့် ကမ္ဘာ့စစ်ပုလိပ်ကြီးသဖွယ် လက်ဝါးကြီးအုပ်စိုးကာ ထင်တိုင်း ကြဲနေလျက် ရှိပါသည်။ ကျန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အများစုကမူ ဒွိ မဏ္ဍိုင်စနစ် ( Biplarity) ပျက်သုံးသွားပြီးနောက် ဗဟုမဏ္ဍိုင်စနစ် ( Multipolarity ) ဖြင့် ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်း လိုကြပါသည်။
အမေရိကန်တို့သည် အထက်ဖော်ပြပါ အန္တိမရည်မှန်းချက်ကို ဖော်ဆောင်ရန် ၄င်းတို့၏ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး မူဝါဒ (၃)ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးအချက်မှာ ပုံဖော်ခြင်း (Shape) ဖြစ်သည်။ ပုံဖော်သည် ဆိုရာတွင် နိုင်ငံတကာနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု တည်ရှိနေရန် ပုံဖော်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း အမှန်စစ်စစ် အမေရိကန် အလိုကျ ပုံဖော်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ တုန့်ပြန်ခြင်း ( Respond) ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ခြိမ်းခြောက်မှု အန္တရာယ်အသွယ်သွယ်ကို လက်မနှေးတု့န်ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းမှာလည်း အမေရိကန် အလိုမကျမှုများကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်သည်ဟု တနည်းအားဖြင့် မှတ်ယူနိုင်သည်။ နောက်ဆုံး အချက်မှာ ပြင်ဆင်ခြင်း ( Prepare) ဖြစ်ပြီး မျှော်မှန်း၍ မရနိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်များကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်အေးလွန်ကာလတွင် ၄င်းတို့ ကျင့်သုံးခဲ့သည့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ပြန့်ပွားခြင်းကို ထိန်းချုပ်သည့် မူဝါဒသည် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲပြီးနောက် အသုံးမတည့်တော့သည့်အခါ အမေရိကန်သည် လွတ်လပ်သည့် စီးပွားရေးစနစ်ကို အခြေခံသည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ တိုးတက်ပြန့်ပွားရန် အားပေးကူညီရေး ဟူသည့် နိုင်ငံခြား ရေး မူဝါဒအသစ်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ကမ္ဘာ့ရှေ့ပြေးနေသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံသည် လွတ်လပ်သည့် ဒီမိုကရေစီ ၀ါဒီများ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူသားချင်း ညာတာထောက်ထားမှု အစရှိသည့် အတွေးအခေါ် အယူအဆများကို အသက်သွင်းပေးလျက် ကမ္ဘာကြီး၏ စစ်ပုလိပ် ( Global Police Man ) သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီး ( Global Governor ) အဖြစ် ရပ်တည် ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါသည်။
““ ကမ္ဘာတွင် မည်သည့်နေရာ ဖြစ်စေ ၄င်းတို့၏ လူသားချင် ညှာတာထောက်ထားမှု ရှုဒေါင့်မှ ကျူးလွန်ပါက အမေရိကန်သည် အင်အားအသုံးပြုလျှက် ကာကွယ်တားဆီးရေး ဆောင်ရွက် ရမည်ဟူသော မူဝါဒ အတိုင်း ဆိုမာလီ၊ ဆူဒန်၊ ဟေတီ၊ ကိုဆိုဗို၊ အီရတ် အစရှိသည့် အရေးအခင်းတွင် စစ်အင်အားကို အသုံးပြုကာ ၀င်ရောက် စွက်ဖက်ခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့တစ်ဝန်းတွင် သြဇာပြန့်ကျက်ရေးနှင့် ၄င်းတို့၏ သြဇာမနာခံ သူများအား ပြစ်ဒဏ်ခတ်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ယင်းတို့၏ စံနှုန်းများကို ကမ္ဘာစံနှုန်းအဖြစ် နေရာတိုင်း တိုင်းတာကာ လိုရင် လိုသလို၊ မလိုရင် မလိုသလို ပြုကျင့်လာခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးမည့် ကုလ သမဂ္ဂကြီးပင်လျှင် အမေရိကန်၏ လက်ကိုင်တုတ်သဖွယ် ဖြစ်နေပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး လက်ဝါးကြီးအုပ် စိုးမိုး ချယ်လှယ်ဗိုလ်ကျမှုသည် ထိန်းမနိုင်၊ သိမ်းမရအောင် ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေး ၀ါဒကို ကျင့်သုံးလာသော အမေရိကန်သည် တစ်ဖက်မှလည်း ၄င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်လာသည့် ခြိမ်းခြောက်မှု မှန်သမျှကို ဟန့်တားရန်နှင့် ချေမှုန်း ရန်မှာ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ရဲ့ အခြေခံစည်းမျဉ်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန်တို့သည် နိုင်ငံတကာ ပတ်ဝန်းကျင် လုံခြုံရေးကို လွှမ်းမိုးထားရန်နှင့် အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်လာနိုင်မည့် အရေးကိစ္စမှန်သမျှကို ထိရောက်စွာ လက်တုန့်ပြန်ပြီး မသေချာသော အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် အထက်ဖော်ပြပါ ကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာကို ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော မဟာဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရာတွင် လက်ရှိ အမေရိကန် သမ္မတ ဂျော့ဒဗလျူဘုရ့် အယူဝါဒဖြစ်သော “ Either you are with us, or you are with the terrorists “ ““ ငါ့နောက်မပါ ငါ့ရန်သူ ”” သည် ကမ္ဘာတတိယ နိုင်ငံများ အတွက် စိုးရိမ် တုန်လှုပ်မှုများကို ဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါသည်။
ဒိုင်လူကြီး မရှိသော ဘောလုံးပွဲ
ယနေ့ ဘောလုံးပွဲများကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှ စိတ်ပါဝင်စားလျက် ရှိကြသည်ကို တွေမြင်ကြရ ပါသည်။ ထိုကမ္ဘာ့ဘောလုံးပွဲများကို ကမ္ဘာ့ဒိုင်လူကြီးများကလည်း စနစ်တကျ ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်လျက် ရှိကြသဖြင့် ဘောလုံးပွဲ ပွဲစဉ်များမှာ အလွန်ပင် ကြည့်ကောင်းလျက် ရှိကြသည်ကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါသည်။
ပင်လယ်ကွေ့ရှိ အီရတ်စစ်မြေပြင်မှ ဘောလုံးပွဲများမှာကား ကမ္ဘာ့ဘောလုံးပွဲများကဲ့သို့ မည်သူ တစ်သီးတစ်ယောက်ကမျှ ကြိုက်နှစ်သစ်ခြင်းမရှိ၊ အုပ်ထိန်းရန် ဒိုင်လူကြီးများကလည်း တစ်ဦး တစ်ယောက်မျှ မရှိသဖြင့် သွေးချောင်းစီးပြီး အရိုးများ တောင်လိုပုံကာ အနိဌာရုံ စစ်ပွဲကြီး တစ်ခု ဖြစ်နေသည်ကိုသာ တွေ့ရပါသည်။
ထိုဒိုင်မရှိသော ပွဲမှာ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသမှ အမေရိကန်နှင့် အီရတ်တို့၏ စစ်ပွဲသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂသည် ကမ္ဘာကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရသော ဒိုင်လူကြီး တစ်ဦးဖြစ်ပါသော်လည်း ထိုပွဲကို လက်ရှောင်၍ နေခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
စစ်ပွဲဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာရမှသာ ပေါ်ထွက်ရစမြဲ ဖြစ်သော်လည်း ယခု အီရတ်စစ်ပွဲမှာမူ မည်သူ့ကိုမျှ ဂရုမစိုက် ဗိုလ်ကျကျူးကျော်သော စစ်ပွဲဖြစ်ပြီး သိန်းဂဏန်းမကသော လူသားတို့သည် ထိုစစ်ပွဲတွင် အတုံးအရုံး ကျဆုံးခဲ့ကြရပီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအီရတ်စစ်ပွဲကြီး ပြီးဆုံးရန် မှာလည်း အရိပ်အရောင်မျှပင် ပေါ်ပေါက်ခြင်း မရှိသေးပါ။
ဤကဲ့သို့ပင် ကမ္ဘာကြီးတွင် လက်ဦးသူက မတော်မတရား ကျူးကျော်သည့် စနစ်ကို သုံးစွဲလျက် ရှိနေပြီ ဖြစ်သဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတို့သည် မိမိတို့ နိုင်ငံကို မိမိတို့ကပင် လုံခြုံအောင် အဘက်ဘက်မှ ထိန်းသိမ်းပြီး ထိုကျူးကျော်သူများ မပေါ်ပေါက် လာနိုင်စေရန်နှင့် ကျူးကျော်မှုများ ပေါ်ပေါက် လာပါကလည်း ကာကွယ်နိုင်ကြရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ လိုအပ်လျက် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ပေါက်ပင်ခွေးမျှော် ဘေးကြီးပေါ် တရားတော်
၂၀၀ရ စက်တင်ဘာလ အရေးအခင်း မဖြစ်ခင်နဲ့ ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် သတင်း site တွေ၊ blog တွေကို ဖတ်ကြည့် မိလိုက်တော့ အစိုးရ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်လာတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်း တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး၊ လူအခွင့်အရေး ဆိုပြီး လုပ်ဆောင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖွဲ့ပြီး မကြာခင်မှာပဲ အဖွဲ့တစ်ချိွု့ဟာ အထောက်အပံ့ရရှိရေး၊ ငွေကြေး အကူအညီရရှိရေး အတွက် ကင်ပိန်းတွေ အမျိုးမျိုးလုပ်ပီး တစ်ဖုံ၊ မော်တော်ကား တစ်စီးနဲ့ အလှူခံလို့ တစ်နည်း၊ UN ကို စာပို့တဲ့နည်းက တစ်ဖုံနဲ့ အနောက် နိုင်ငံတွေကနေပြီး တစ်စာစာနဲ့ စောင့်မျှော် တောင်းခံနေပြီး ဒီမိုကရေစီ အသွင်သဏ္ဍာန်၊ နိုင်ငံရေး အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ စီးပွားဖြစ် လုပ်ဆောင် နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့် အရေးကို အကြောင်းပြပြီး ကိုယ်ကျိုးစီးပွားဖြစ် လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ လူတစ်ချို့တွေနဲ့ အဖွဲ့ တစ်ချို့ အတွက် ကျွန်တော် အနေနဲ့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ ကိံသုကောပမသုတ် ( ပေါက်ပင်ခွေးမျှော် ဘေးကြီးပေါ် တရားတော် ) ဆိုတဲ့ တရားလေးတစ်ပုဒ်ကို နာယူမှတ်သား ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်း လိုပါတယ်။
( ပေါက်ပင်ခွေးမျှော် ဘေးကြီးပေါ် တရားတော် )
ယထာပိ ပုပ္ဖတံ ဒိတွာ ၊ သိင်္ဂါသေလာ ကိံသုကံဝနေ၊
မံသရုက္ခော၊ မယာလဒ္ဓေါ၊ က္ကတိဂန္တန ဝေဂသာ
ယထာပိ - သင်တို့တစ်တွေသည် ၊ ၀နေ - တောကြိုင်ကြီးထဲ၌ ၊ သိင်္ဂါလော - တောမှာ ကျက်စား ပျော်ပါးနေသည့် မြေခွေးသည်၊ ပုပ္ဖတံ - တစ်ပင်လုံး နီရဲရဲ ပွင့်၍ နေသော၊ ကိံသုကံ - ပေါက်ပင်ကြီး ကို ၊ ဒိသွာ - အစာရှာဖွေရန် သွားရင်းလာရင်း ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ မြင်တွေ့ရသည်။ ပေါက်ပင်က တစ်ပင်လုံး ရဲရဲနီ ပေါက်ပွင့်တွေကို အမဲသားငါးတွေလို့ မြင်သည်။ ထိုသို့ မြင်လိုက်ရသည်နှင့် မြေခွေးက၊ မယာ - ငါသည်၊ မံသရုက္ခော - အသား သစ်ပင်ကြီးကို၊ လဒ္ဓေါ - ကံကောင်းထောက်မ၍ ငါရလေပြီဟု ၀မ်းသာလျက်ရှိပြီး၊ က္ကုတိ - ဤသို့ တွေးပီး စိတ်ကူးယဉ်ကာ ၊ ဝေဂသာ - အဟုန်အမြန်ဖြင့်၊ ဂန္တန - သစ်ပင်အနီးရောက်အောင် ပြေးသွားခဲ့ပြီး ပေါက်ပင်ပေါ်၌ ပွင့်နေသော ပေါက်ပွင့်များကို မခုန်နိုင်၊ မခူးနိုင်သောကြောင့် သစ်ပင်အောက် ဆောင့်ကြောင်ထိုင်ပြီး မျှော်နေခဲ့ ပါသည်။ ပေါက်ပွင့်ခွေးမျှော် ဆိုသည့်အတိုင်းပင် အသားတစ်များကို စားလိုက်ရပါက အဘယ်မျှ အရသာ ရှိလိုက်မလဲဟု တွေးတော စိတ်ကူးယဉ်ပြီး အပင်အောက်မှာ ထိုင်မျှော်နေပါသည်။
ပတိတံ အတိကံ ပုပ္ဖံ ၊ ဍံသိတွာ အတိလောလုပ္ဖေါ။
နယိဒံ မံသံ အဒုံ မံသံ ယံ ရုက္ခသ္မိ န္တိ ဂဏှာဟိ။
ပတိတံ အတိတံ ပုပ္ဖံ - လေတိုက်၍ တဖုတ်ဖုတ်ကြွေကျလာသော ပေါက်ပွင့်များကို ၊ ဍသိတွာ - ပြေး၍ ကိုက်ပြီးသည်ဖြစ်၍၊ အတိလောလုပ္ဖေါ - အလွန်လောဘကြီးသော ၊ သိင်္ဂါလော - မြေခွေးသည် ၊ ဍံတံတွာ - ကိုက်စားလိုက်ပြီးသည့် နောက်တွင် ၊ က္ကုဒံ - ယခု ကြွေကျလာ၍ ကိုက်စား လိုက်သော အရာဝတ္ထုသည် ၊ နမံသံ - အသားတစ်မဟုတ်သေးပါ၊ ရုက္ခသ္မိံ- သစ်ပင်ကြီးပေါ၌ ၊ ယံ - ရဲရဲနီနေသော အရာဝတ္ထု တို့သည်၊ အတ္တိ - ရှိနေ သေး၏ ။ အဒုံ - ထိုသစ်ပင်၌ ရှိနေသော အရာဝတ္ထု သည်သာလျှင် ၊ မံသံ - အင်မတန် အရာသာရှိသည့် အသားတစ် အစစ် ဖြစ်ပေသည်။ က္ကုတိ - ဤသို့ ဂဏှာဟိ - မှတ်ထင်တွေးတာ ပေါက်ပွင့်များကို ဆက်၍ မျှော်နေရှာလေသည်။
ယခင်ကကဲ့သို့ ပေါက်ပွင့်ကြွေလိုက်၊ ကောက်စားလိုက်နှင့် အကြိမ်ကြိမ် ကြွေကျ၊ အကြိမ်ကြိမ် ကောက်စားနေသော်လည်း အသားတစ်မဟုတ်သေး၊ သစ်ပင်ပေါ်မှာ ကျန်နေသေးသည့် အရာများက အသားတစ် အစစ်ဟု ထင်မှတ်၍ စောင့်မျှော်ရင်းဖြင့် အားမရသေး၊ နောက်ထပ်ကျလာတဲ့ အရာမှ အသားတစ် အစစ်ဟု ဆိုကာ ဆက်၍ ဆက်၍ မျှော်ရင်းဖြင့် အချိန်ကုန်ကာ မိုးချုပ်သွားလေသည်။ ညမှောင်၍ ကျား၊ ကျားသစ်၊ ခြင်္သေ့ တို့ အစာရှာထွက်လာသည်နှင့် အသေဆုိုး၍ သေဘေးဒုက္ခ ရောက်ကြရပေတော့သည်။ (သာဓု-သာဓု-သာဓု)
မောင်ဒိုင်း အတွက် ဆုံးမစာ
ပြောလိုက်ပြန်ရင်လည်း စွာကျယ်၊ စွာကျယ်၊ မထိခလုတ်၊ ထိခလုတ်၊ စောင်းသလို၊ ချိတ်သလို၊ ကလိသလို၊ ရိသလို၊ ခနဲ့သလို၊ ရွဲ့သလိုနဲ့ အဆီအနှစ်မရှိ သိမ်ဖျင်းတာတွေ၊ အကျိုးယုတ် စေနိုင်တာတွေကို ပြော၊ လုပ်သမျှကလည်း အမြီးအမောက် မတည့်၊ ဖီလာ ကန့်လန့်၊ တစ်ဇောက်ကန်၊ တစ်ဇွတ်ထိုး၊ ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိ၊ စိတ်ထားကလည်း ငါနဲ့ ငါ့အတွက်က လွဲရင် ကျန်တာ ဘာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာကိုမှ အကောင်းမမြင် နိုင်တဲ့ မောင်ဒိုင်း အတွက် လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ဆုံးမစာ-
ရွှေပြည်ချမ်းသာ၊ စံချင်ရှာ၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာသို့ချဉ်း
ဂင်္ဂါသဲမျှ ၊ ပွင့်ကုန်ကြသား
ဘုရားသာသနာ ၊ ခေတ်အခါဝယ်
လူ့ရွာနတ်၌ ၊ နင်ကြုံကြိုက်လည်း
အခြေအကြီး ၊ အချည်းနှီးလျှင်
အမိုက်အပြား ၊ အင်လေးပါးထက်
နင်ကားရာထောင်၊ မကမှောင်၏ ။ ။
ကြမ္မာတော်၍ ၊ ယခုတွေ့လည်း
မိုက်မြဲနှင်နှင် ၊ မိုက်စရွှင်၏ ။ ။
မျက်မြင်လောက ၊ ဤဘ၀ကား
ဒုက္ခစင်းစင်း၊ ချမ်းသာကင်း၏ ။ ။
အရူးပြင်ပြင် ၊ နင့်ကိုထင်၏ ။ ။
နင်နှင့်မဆိုင် ၊ နင်ပိုင်မဟုတ်
နင့်ရုပ်နှင့် နာမ်၊ နင့်သဏ္ဍာန်ကို
မူးမူးမေ့မေ့ ၊ အများလေ့ဖြင့်
ပြာပုံအပြီး ၊ ဖြစ်လုနီးပြီ။ ။
တငြင်ငြိုငြို ၊ ဆင်းရဲပိုလျက်
အစမဆုံး၊ အများထုံးတည့်။ ။
အနှုန်းမပျက် ၊ အောက်နရက်ဝယ်
နင့်လိုလူမိုက်၊ သွားလမ်းတည်း။ ။
ဂေါတမ ဗုဒ္ဓဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ လူသိများလာတဲ့ ဘာသာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်တယ်။ "ဗုဒ္ဓ" ဆိုတဲ့အမည်က အရိယာသစ္စာသိပြီး သဗ္ဗညုဥာဏ်တော်ကိုရပြီး ဘုရားဖြစ်မှ ခေါ်ကြတာ။ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က နိုးထခြင်း၊ အလုံးစုံကို သိမြင်တော်မူသော သဗ္ဗညု မြတ်စွာဘုရား ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ လူ့သမိုင်းတလျှောက် တိရစ္ဆာန်တွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အဆုံးအမတွေကို ဟောကြားတော်မူတဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓက ပထမဆုံးပါ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ မဟာလူသားတစ်ပါးပါ။ သူ့ရဲ့သက်တမ်းတော်တစ်လျှောက်လုံးမှာ လူသားတွေအပေါ် ထူးထူးခြားခြား ဘုန်းတန်ခိုး သြဇာကြီးမားစွာ လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်။ မရပ်မနား လှုပ်ရှားသွားလာပြီး တရားဓမ္မတွေကို သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ အာစရိယ ဆရာဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ သူ့တရားကို နာယူသူ လူပေါင်းများစွာကို မဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ဥာဏ်ကို ရရှိစေခဲ့တယ်။
ဒီလို မြင့်မြတ်တဲ့ အထွဋ်အမြတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမည်ကို လူတွေ သောက်စားမူးယစ်ရာ ပျော်ပါးကြရာ ဘားခန်းတစ်ခုရဲ့နာမည်အဖြစ် သုံးတာဟာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကို ကိုးကွယ်စည်းကပ်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို စော်ကားခြင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ တားဆီးခြင်း၊ ကန့်ကွက်ခြင်း မရှိဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ကိုင်နေလိုက်တာများ ဆိုင်ခွဲပေါင်းကို မနည်းဘူးဗျာ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကတည်းက စလာလိုက်တာ အခုဆို ဆိုင်ခွဲပေါင်း ရှိနေပြီလေ။ ဟိုနိုလူလူမှာရှိတဲ့ ဘားတစ်ခုပဲ ပိတ်သိမ်းအောင် လက်မှတ်ထိုး ကန့်ကွက်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဒီလို ကိစ္စမျိုးကျတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေ ဘယ်များရောက်နေပါလိမ့်။ ဟိုတလောက သံဃာတော်တွေ သွေးမြေကျပါပြီ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ထိပါးနေပါတယ်နဲ့ အော်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေ ဒီ ဗုဒ္ဓဘားတွေ ဖွင့်ခဲ့တုန်းကတော့ ဘယ်နားမှာ သွားအိပ်နေကြပါလိမ့်။ မခံချင်လွန်းလို့ ရေးနေတာပါ။ တကယ်တမ်း စော်ကားနေတာကျတော့ ငြိမ်ခံနေကြတယ်။ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကိုတောင် သွားပြီး lobby လုပ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေ ရှိနေကြတာပဲဗျာ။ ဒီလူတွေ ဒါမျိုးကျတော့ lobby လုပ်ဖို့ မစဉ်းစားမိဘူးလား။ ကျွန်တော် နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိအစိုးရဘက်လိုက်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်အုပ်စုကို ကျိန်ဆဲနေတာလဲမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်လာတော့မှာ ဘာသာရေးတို့၊ သာသနာရေးတို့ ထအော်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့ လူထူးလူဆန်းကြီးတွေကို မြင်ပြင်းကပ်လွန်းလို့ ပြောနေတာပါ။
အတွေးအမြင်များ http://thoughtsnvisions.blogspot.com/ မှ ရယူ ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာအစိုးရက အကျဉ်းသား ၈၀၀၀ကျော်ကို လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့် ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၃ရက် ည၈နာရီ ရုပ်သံသတင်းမှာ အဲဒီ့သတင်းကို ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျင်းပ ပြီးစီးခဲ့တဲ့ အမျိုးသားညီလာခံ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခြင်း ၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ရက်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမူကြမ်း စတင် ရေးဆွဲနိုင်ခြင်း စတဲ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ယခုလို တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၁၆ရက်ကနေ ဒီဇင်ဘာ ၃ရက် အထိ စုစုပေါင်း အကျဉ်းသား ၈၅၈၅ဦးကို လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့် ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ့အထဲမှာ ထိုင်းလူမျိုး အကျဉ်းသား ၃၃ဦးလဲ ပါဝင်တယ်လို့ သတင်းမှာ ကြေငြာသွား တာပါ။ သတင်းမှာတော့ အကျဉ်းသားရယ်လို့ပဲ သုံးးနှုံးသွားပြီး မည်ကဲ့သို့သော ပြစ်ဒဏ် ကျခံ နေကြသူများ ရယ်လို့တော့ အသေးစိတ် ကြေငြာသွားခြင်း မရှိပါဘူး။
လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ပေးကြောင်းကြေငြာတဲ့ တစ်ရက်တည်းမှာပဲ လမ်းပြမြေပုံရဲ့ အဆင့် ၃ဖြစ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကို နေပြည်တော်မှာ စတင်လိုက်ပါပြီ။ ကော်မရှင် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် နေပုံတွေကို အစိုးရက သံတမန်တွေနဲ့ မီဒီယာသမားတွေကို ဒီဇင်ဘာ၃ရက်မှာ ဖိတ်ခေါ်ပြသခဲ့ပါတယ် (ပုံ)။ အဲဒီ့ရက်မှာပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာအရေးအခင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကိုပါ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ်။
http://yangonmedia.com/ မှ ရယူပါသည်။
http://www.yangonmedia.com/ မှ ကူးယူထားပါသည်။
ဖိုးသောကြာတို့ သတင်းစာပညာမှာ "ဖြစ်လာတဲ့သတင်းကို အမှန်အတိုင်းတင်ပြရမယ်(Report)၊ သတင်းအမှန် ရဖို့အတွက် ပထမဆုံးရတဲ့သတင်း (Information) ကို အမှန်လို့မယူရဘူး၊ (First Information Right)၊ သတင်း စာဆရာဟာ"အလယ်လူ"(Media) ခြံစည်းရိုးပေါ်ခွထိုင်ပြီး သာတဲ့ဘက် ခုန်ချတဲ့သူမျိုး (Sitting on the fence) မဟုတ်ဘဲ ဘယ်ဘက်မှမယိမ်းယိုင်ဘဲ "အလယ်လူ" ဖြစ်ရမယ်။ ဖြစ်လာတဲ့သတင်းကိုဖော်ပြရာမှာတော့ လူထု ရယ်၊ အစိုးရ(ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး)ရယ်၊ နိုင်ငံတကာရယ်ဆိုတဲ့ ပကတိအခြေခံအကျိုးဆက် တွေအပေါ် "ချင့်ချိန်နှိုင်းဆ" ဖော်ပြရမယ်။ လံကြုပ်သတင်းမလုပ်ရဘူး၊ တင်းမှန်အပေါ် မိမိရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်၊ မှတ်ချက်ဂယက်တွေ ကိုတော့သတင်းစာဆရာရဲ့ကိုယ်တိုင်(By-Line)အနေနဲ့ ဖော်ပြရမယ်၊ အဆုံးအဖြတ်က လူထုသာဖြစ်တယ်"လို့ သတင်းစာဆရာရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ ခံယူချက်တွေကို မြန်မာ သတင်း စာ ပညာအဖြစ် ဖိုးသောကြာတို့ မြန်မာသတင်းစာ ဆရာကြီးများထံမှ လက်ဝေခံ ရယူခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာသတင်းစာ ဆရာကြီးများက "အတင်းအဖျင်းမရေး သတင်းသာရေးသည်" "ချစ်သူကို မသာစေရ မုန်းသူကို မနာစေရ"ဆိုတဲ့အခြေခံတွေပေါ်မှာ မြန်မာသတင်းစာဆရာ ကျင့်ဝတ်(၁၀)ပါးကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှာ မြန်မာစာနယ်ဇင်း ကောင်စီက ပြဋ္ဌာန်း ပေးခဲ့ပါတယ။် ဒါပေမယ့် ဖိုးသောကြာတို့ မြန်မာစာနယ်ဇင်း နယ်ပယ်မှာ လိုက်နာ ကျင့်သုံးမှု အားနည်းတာကိုတော့ ၀န်ခံပါတယ်။
ချင့်ချိန်နှိုင်းဆ ဖော်ပြရမယ့် သတင်းမျိုးက အထူးသဖြင့် "နိုင်ငံရေးသတင်းတွေ ဖြစ်တာ များပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး လူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ သက်ဆိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းစာဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ အမြွှာဖြစ်တယ် (Twin)၊ နိုင်ငံရဲ့ အစိတ်အပိုင်း (Part of the Country ) ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ထုံး(usage)က နိုင်ငံတကာ သတင်းစာနယ်ဇင်း မှာရှိနေတာ ဒီသဘောပါပဲ။ ဒါကြောင့် သတင်းစာဆရာရဲ့ သတင်းနဲ့ သတင်းဆောင်းပါး ဖော်ပြမှုတွေဟာ သိပ်ကို နူးညံ့သိမ်မွေ့ ပြေပြစ်ချောမွေ့(Delectate)စွာ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲသလို ဖြစ်မလာလို့ကတော့ "ချွန်တွန်း" "အတို့အထောင်"လုပ်သလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်လည်း ဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိသလို ဖြစ်နေတာတွေ၊ ဖြစ်လာတာ တွေလည်း ဒီကနေ့ တွေ့မြင်ဖတ်ရှု ကြားသိ နေရဆဲပါ။
နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ကြေညာချက် ၁/၂၀၀၇နဲ့ ၂/၂၀၀၇ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒီကနေ့ သတင်း မီဒီယာတွေမှာ လူထုက သိချင်တာတွေကို သတင်းပညာနဲ့ သတင်း ဖော်ပြပေး နေရာမှာ (ဖိုးသောကြာကိုလည်း သတင်းစာဆရာ တစ်ဦးအနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်က အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ပြီး ဖော်ပြပေးခဲ့တော့ နိုင်ငံနဲ့လူထု အကျိုးစီးပွားကိုသာ သတင်းစာဆရာ အနေနဲ့ ဦးတည်ဖြေကြားခဲ့ ပါတယ်) ဖိုးသောကြာ မြင်သိဖတ်မိတာတွေ ကြားနေရတဲ့ သတင်းနဲ့ဆောင်းပါး တွေထဲက "ချွန်တွန်း" "အတို့အထောင်" သဘောတွေကိုတော့ ရိုးစင်းတဲ့လူထုက သိဖို့၊ မြင်တတ်ဖို့လို ပါတယ်။ သိမှလည်း ရှောင်တတ်ပြီး အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း သိနိုင်ကြမှာပါ။
ဖိုးသောကြာတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့ အဆုံးအမနဲ့ ၃၈ဖြာမင်္ဂလာတရားကို လိုက်နာကြပါ တယ်။ လောဘ၊ ဒေါသ၊မောဟ၊ မာန်မာန၊ အာဃာတတွေကို ဗုဒ္ဓအဆုံးအမနဲ့ ထိန်းချုပ်ကြပါတယ်။ ဒါကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ပြည်တွင်းပြည်ပ အကုန်သိနားလည် လက်ခံကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ "ချင့်ချိန်နှိုင်းဆ" ကျတဲ့ နေရာမှာတော့ အပြုသဘောထက် "ချွန်တွန်း" " အတို့အထောင်" တွေက များနေသလိုပါပဲ။
နိုင်ငံတော်အစိုးရ ကြေညာချက် ၁/၂၀၀၇အရ နိုင်ငံတော်အရေး ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ စတင်နေကြပါပြီ။ ဆွေးနွေးကြမယ့် နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ် တွေးခေါ်မှု အတိမ်းအစောင်းဖြစ်စေမယ့် အရေးအသားမျိုးတွေကို မီဒီယာ တွေက တည်ငြိမ်မှုကို၊ အေးချမ်းမှုကို အမှန်တကယ်လိုလားရင်၊ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုကို အမှန်တကယ် မလိုလားရင် နိုင်ငံတော် အကျိုးအတွက် ဦးတည်ဖော်ဆောင် ပေးစေချင် ပါတယ်။
ဖိုးသောကြာတို့နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် (တစ်နည်း သမိုင်း)မှာ အာဃာတတွေ၊ အငြိုး အတေးတွေ၊ လောဘ၊ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန်မာနတွေဟာ (ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ မဟုတ်ကြတဲ့အတိုင်း) အစွန်း နှစ်ပါးကို မလွတ်ခဲ့ကြလို့ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ အခါခါပျက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ "၁၉၆၃ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲရောက် လာတဲ့ (ဗကပ) ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လာနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာ အားလုံးက လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြ ပေမယ့် မဆက်တဲ့သူ (သခင်တင်မြ-အင်တာဗျူး၊ လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ် တွဲ၁/မှတ်-၅၂၊ ၁၉/၁၀/၂၀၀၇ နှာ-၂၈)ကို "အတော်အာဃာတကြီးတဲ့သူတွေပဲ"လို့ သခင်တင်မြက ဆိုကြောင်း ဖော်ပြထားတာ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲသလို နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ သမိုင်းတွေကိုဒီနေ့မှာ မမေ့မလျော့ကြဘဲ ဆက်လက် သုံးသပ်သင်ခန်းစာယူ၊ အဖြေရှာသင့်ပြီလို့ သမိုင်းမှာ သက်သေလုပ်ကြရတဲ့ သတင်းစာဆရာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ခံယူပါတယ်။
ဖိုးသောကြာတို့ နိုင်ငံတော်ကြီးနဲ့ လူထုကြီး ကောင်းကျိုးအတွက် မီဒီယာတွေက အဖျက်သဘော ချွန်တွန်းအတို့ အထောင်ကို ရှောင်၊အပြုသဘောဆောင်ပြီး ဆွေးနွေးဖက်တွေ နီးစပ်သထက်နီးစပ်အောင် ဒီနေ့လို အတိမ်းအစောင်းမခံတဲ့ အချိန်မှာ ““ချင့်ချိန်နှိုင်းဆ”” ဖော်ပြမှသာ တိုင်းပြည်အပေါ် တာဝန် ကျေကြမှာ ပါခင်ဗျ။ (ရေးသားသူ - ဖိုးသောကြာ)
အခုတစ်လော မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနောက်အုပ်စု နိုင်ငံကြီတွေ၊ ကိုလိုနီလက်သစ် လက်ဝေခံ မီဒီယာတွေဟာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ပြည်နယ်တွေကို ခွဲထွက်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြှောက်ပင့် သွေးထိုး တာတွေ၊ တိုက်တွန်းနေတာတွေ၊ လှုံ့ဆော်နေတာတွေကို တွေ့နေရတဲ့အတွက် ခွဲထွက်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်အမြင်ကို ပထ၀ီ နိုင်ငံရေး အနေအထားနဲ့ သုံးသပ် တင်ပြ လိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး အနေအထားကို ပြန်ကြည့်ပါ ။ လူသန်းပေါင်း (၁၂၀၀)ကျော်၊ သန်းပေါင်း (၁၀၀၀)ကျော်၊ သန်းပေါင်း (၁၄၀) လောက် များပြားတဲ့ နိုင်ငံတွေ အကြားမှာ လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု မရှိလှဘဲ တည်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ လူဦးရေ ဖိအားကို အမြဲတစေ စိုးရွံ့ သတိထား နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိနိုင်ငံကို စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ကာကွယ် နိုင်မှသာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ ရေရှည် သက်ဆိုးရှည်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် မြေမျက်နှာ သွင်ပြင် အနေအထားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် လူနေထူထပ်တဲ့ မြစ်ဝှမ်းဒေသများကို ၀န်းရံကာကွယ်ထားတဲ့ တောင်တန်းများက မြန်မာနိုင်ငံကို သဘာဝခံတပ်သဖွယ် ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ထောင်ပေါင်း များစွာ အတွင်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှ အင်အားကြီး နိုင်ငံကြီးများရဲ့ ကျူးကျော်လွှမ်းမိုးမှုကို မခံခဲ့ရခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လုံခြုံရေးအရ မြေပြန့်ဒေသများအတွက် တောင်တန်းဒေသဟာ သဘာဝခံတပ် မြို့ရိုးကြီး သဖွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်တန်းဒေသများ အနေနဲ့လည်း ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား အဓိက စားနပ်ရိက္ခာ များက အစ အထွေထွေ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းများ အားလုံးအတွက် မြေပြန့်ကနေ ရယူနေရတာ ချည်းပဲ ဖြစ်လို့ မြေပြန့်ဒေသ မပါဘဲလည်း တောင်တန်းဒေသတစ်ခုတည်း မရပ်တည် နိုင်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် တောင်တန်း ဒေသ ပြည်နယ်များ ခွဲထွက်သွားလျှင်လည်း land locked ကုန်းပိတ်နိုင်ငံငယ်များ အဖြစ်ပဲ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကို မမှီခိုရလျှင် အခြား တစ်ဖက်တစ်ချက်က နိုင်ငံကြီးများကို မှီခိုအားကိုး ရတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ မှီခိုသူအား အမှီခိုခံသူက လွှမ်းမိုးလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေ သန်းရာထောင်ချီရှိနေပြီး လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု များလှတဲ့ နိုင်ငံကြီးကို မှီခိုရတဲ့ လူဦးရေကြဲ၊ အားနည်းလှတဲ့ နိုင်ငံပေါက်စနကလေး တစ်ခုရဲ့ ဘ၀ဟာ မြေမမျိုဘဲ လူမျိုခံရတဲ့ အဖြစ်ကို အနှေးနဲ့ အမြန် ဆိုက်ရောက်သွားရမယ် ဆိုတာ မလွှဲပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တောင်တန်းဒေသ ပြည်နယ်များ အနေနဲ့လည်း ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု မပျောက်မပျက် ထိန်းသိမ်းလိုတယ်ဆိုရင် လူအင်အား အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ မြေပြန့်ဒေသနဲ့ မခွဲမခွာ စတမ်း ပေါင်းစည်းထားရမယ် ဆိုတာကလည်း မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက် တစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပထ၀ီနိုင်ငံရေး အနေအထားက ခွဲထွက်ခွင့်ကို လုံးဝမလုပ်သင့်ကြောင်း ပြဌာန်းလျက် ရှိတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။
နိုင်ငံရေး အချက်အလက်မှာ ဒီပထ၀ီနိုင်ငံရေးဟာ အခြေအမြစ် အကျဆုံးနဲ့ အပြောင်းအလဲ အနည်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး စနစ်အားလုံးကို လွှမ်းမိုးပြီး သြဇာ အသက်ရောက်ဆုံးလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ ပထ၀ီနိုင်ငံရေးရဲ့ ပြဌာန်းချက်များဟာ မှားခဲပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခွဲထွက်ခွင့်ဆိုတာ စိတ်ကူးပင် မယဉ်ကောင်းတဲ့ အရာလို့ ကျွန်တော် ထင်မြင်မိပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ က အန်တီစုရဲ့ အာဏာ လွှဲအပ်ချက်အရ စင်ကာပူ နိုင်ငံမှာ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့တဲ့ ကြေငြာချက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပါတီများ ၊ တိုင်းရင်းသားများ အရေးကို အန်တီစုက ၄င်း၏ တာဝန်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက် မည် ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖတ်လိုက် ရတော့ အန်တီစုကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ.. သူ့ကိုယ်သူ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း လို့များ သတ်မှတ်ထင်ထားသလားလို့ ကျွန်တော် တွေးထင် လိုက် မိပါတယ်။
အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယခု ကာလတိုင်အောင် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပြည်သူအားလုံးရဲ့ အသည်းမှာ မှတ်ယူ ထားကြတာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဖြစ်ပီး ဘယ်သူမှ အဲဒီနေရာကို အစားထိုး နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။ ဒီနေရာမှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရမယ် ဆိုရင် အန်တီစုမှာ ထူးချွန်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ အများကြီးရှိတာ ကျွန်တော် လက်ခံပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ တက္ကသိုလ်ကြီး တစ်ခုက ဘွဲ့ရ၊ ပညာတတ် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကားကို မိခင် ဘာသာစကား သဖွယ် ကျင်လည်စွာ ပြောဆိုရေးသား နိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်း ချက် ကြီးမားပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့ သမီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလောက်နဲ့တော့ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအဖြစ် လက်ခံဖို့ ဆိုတာ သေသေချာချာ စဉ်းစား ကြည့်လျင် မလုံလောက် သေးပါ။ အန်တီစု အနေနဲ့ ဖခင် ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ နေရာကို အစားထိုး ၀င်ရောက်ဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့ မလွယ်လှပါ။
ဗိုလ်ချုပ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ နတ်မောက်မှာနေ၊ နတ်မောက်မှာ မွေးပြီး နတ်မောက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့သူ ဖြစ်ပါ တယ်။ မြန်မာ့လူနေမှု အဆောက်အဦး အတွင်းမှာ ပေါက်ဖွား ကြီးပြင်းလာရသူ၊ ပြည်သူလူထုနှင့် အေးအတူ၊ ပူအမျှ ကျွန်ဘ၀တွင် ခံစားလာခဲ့ရသူ၊ ပညာရေးမှာလည်း မျိုးချစ်စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တဲ့ ရေနံချောင်း အမျိုးသား ကျောင်းမှာ ပညာသင်ကြားခဲ့ရသူ၊ တက္ကသိုလ်မှာလည်း တစ်စိုက်မတ်မတ် နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကို ရည်မှန်းလျက် အပတ်တကုတ် ကြိုးစား လှုပ်ရှားခဲ့သူ၊ နယ်ချဲ့ လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုမှာလည်း အဆင်းရဲခံ၊ အငတ်ခံ၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်လွှတ်ခဲ့သူ၊ နောက်ဆုံးမှာ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ကို တောင်မှ ပေးလှူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြုံပီး ပြောရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရေး သမိုင်းကြောင်းမှာ စဉ်ဆက်မပြတ် ပါဝင် ဦးဆောင်လာသူ ဖြစ်ပါတယ်။
အန်တီစုကတော့ ပြည်ပ မှာ အနေကြာသူ၊ ပညာရေးမှာလည်း ပြည်ပကျောင်းများမှာ အနေများ ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကာလများစွာ ကင်းကွာနေခဲ့သူ၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပြင်ပမှ လေ့လာမှု ရှုဒေါင့်များနဲ့သာ အထိအတွေ့များခဲ့သူ၊ မြန်မာနိုင်ငံရေး သမိုင်းကြောင်းရဲ့ ပွဲကြည့် ပရိသတ် တစ်ဦးမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အန်တီစုအနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ခြေရာကို ဘယ်လောက်ပဲ နင်းနိုင် နေပါစေ၊ ဒီအရာများဟာ အစားထိုးလို့ ရနိုင်တဲ့ အရာများ မဟုတ်ပါ။ အောက်စဖိုဒ့် တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့တွေ ၊ ဆုတံဆိပ်တွေနဲ့လည်း အစားထိုးလို့ မရနိုင်ပါ။
ဒါ့အပြင် အန်တီစု အနေနဲ့လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ဖြစ်နိုင်ရေးအတွက် ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း ပျက်ကွက်မှု တစ်ခုက ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီအချက်က နိုင်ငံခြားသားနဲ့ လက်ထပ်ပြီး အဲဒီနိုင်ငံသား အဖြစ် ခံယူထားခြင်း၊ သားနှစ်ဦးစလုံး ကလည်း အဲဒီ နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်နေခြင်း၊ အဲဒီအချက်တွေကြောင့် အန်တီစုဟာ တစ်ပါးနိုင်ငံရဲ့ သစ္စာတော်ခံ အခွင့်အရေး အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားခွင့်ရှိနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
အန်တီစုဟာ တကယ်ပဲ တိုင်းပြည်ကို ချစ်လို့လား၊ ပုဂ္ဂလိက ရည်မှန်းချက် ဆန္ဒ တစ်ခုအတွက် ဗိုလ်ချုပ် အရှိန်အ၀ါနဲ့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှု၊ လူထုဂရုဏာကို ရယူအသုံးချနေတာလား ဆိုတာကိုတော့ သူ့ဘ၀၊ သူ့နောက်ကြောင်း၊ သူ့လုပ်ရပ်များနဲ့ နှိုင်းချိန် စဉ်းစားကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအနှံ့ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေးကာလက ပင်နီရင်ဖုံး၊ ယောထဘီနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက် ကြေငြာခဲ့ပြီး လက်တွေ့ မှာတော့ အင်္ဂလန်က ပိတ်စများ၊ ဂျုံမှုန့်များ၊ ဗာဒံစေ့နဲ့ ငြုတ်ကောင်းမှုန့်က အစ မှာယူ သုံးစွဲတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ (ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ နိုင်ငံတော် စာတိုလေးမှာ ) ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြားကို အကောင်းလုပ် စားသွားရှာတဲ့ သေတဲ့အချိန်အထိ အ၀တ်သုံးလေးစုံထက် ပိုမရှိရှာတဲ့ ၊ ရိုးရိုးကျင့် ရိုးရိုးနေ ဟန်ပန် မလုပ်တတ်တဲ့ ရှေ့တစ်မျိုး ကွယ်ရာတစ်မျိုး မလုပ်တတ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ပြေးပြေးပြီး ယှဉ်ထိုးကြည့်စရာ အကွက်များ ဖြစ်လို့ နေပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ .. ဒီလို အန်တီစု ဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မဟုတ်လို့လဲ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း တွေအားလုံးက ကန့်ကွက်နေကြတာ မဆန်းဘူးလို့ သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။
မစ္စတာဂမ်ဘာရီ စက်တင်ဘာလ နောက်ပိုင်း ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး အပြန်တွင် အန်တီစု ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်အား စင်ကာပူတွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ ပါသည်။ ထိုကြေညာချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး အတွက် ၄င်းမှ နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ခေါ်ယူညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြ ထားသည်ကို ဖတ်ရပါသည်။ အံ့သြစရာ ကောင်းလှပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်တွင် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု အတွက် ယခင်လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင် ခဲ့ကြသော တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများအား တပ်မတော်မှ နိုင်ငံတော် တာဝန် ထမ်းဆောင်ချိန်မှ စ၍ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်မှုနှင့် နယ်မြေ အေးချမ်းမှုအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူ တည်ထောင်ခဲ့ရာ ယခုအခါ မြန်မာ နိုင်ငံအနှံ့ အပြား နေ့ရောညပါ အေးချမ်း တည်ငြိမ်စွာ သွားလာ လုပ်ကိုင်လျက် ရှိကြသည်ကို နေရာတိုင်း တွင် တွေ့မြင်ပြီး လက်တွေ့ ခံစားနေကြရပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၄င်းအခြေအနေသည် မြေပြင် လက်တွေ့ အမှန်တရား ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ပြင် စည်းကမ်း ပြည့်ဝပြီး ခေတ်မီ ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်ရန်အတွက် အမျိုးသား ညီလာခံတွင် နိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အခြေခံမူများ ချမှတ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအခြေအနေ ကိုလည်း မျက်စိအောက်တွင် မြင်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မျက်စေ့အောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်မှုရှိရန် ဆောင်ရွက်မှု၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်အောင် အမျိုးသားညီလာခံတွင် ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို အန်တီစုမမြင်ဘဲ ဖေါ်ပြပါအတိုင်း "ဂမ်ဘာရီ" မှတဆင့် စင်္ကာပူတွင် ကြေညာချက် ထုတ်ခြင်းမှာ အနီးတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဆရာကြီးများ ခိုင်းစေချက်အတိုင်း ရေးသား ထုတ်ဝေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အန်တီစု အနီးမှုံရောဂါ ဖြစ်နေသည်။ ၄င်း အနီးမှုံရောဂါသည် အနောက်တိုင်း အထင်ကြီး၊ ဒေါ်လာများကို စားသော အစားအစာများမှ ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် မဲဝယ်မှုများ ရှိနေသည်
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် မဲဝယ်မှုများ ရှိနေသည် ဟူသော ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၀၆ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် Deutsche Presse Agentur မှ JT Nguyen ရေးသားသည့် Vote Buying in UN Security Council (By Any Other Form Study ) ဆောင်းပါးတွင် ရေးသားချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီတွင် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာခြင်း အားဖြင့် အမေရိကန် ကဲ့သို့ ချမ်းသာသော နိုင်ငံများမှ စီးပွားရေး အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ကြောင်း၊ ထိုချမ်းသာသော နိုင်ငံများက လုံခြုံရေး ကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများထံမှ မဲဝယ်ရန် ချဉ်းကပ်ဆက်ဆံ လာကြ ကြောင်း ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာချက်တစ်ရပ်က ဆိုထားပါသည်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် စီးပွားရေး ပညာရှင် နှစ်ဦး၏ အဆိုအရ လုံခြုံရေး ကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် (၁၅)နိုင်ငံတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများသည် အဓိကအားဖြင့် အမေရိကန် နိုင်ငံထံမှ ငွေကြေး အထောက်အပံ့အကူအညီများကို ကမ္ဘာပေါ်၌ ပဋိပက္ခများ၊ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းများ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် ပိုမိုရရှိနိုင်ကြကြောင်း၊ ထိုအချိန်အခါ မျိုးတွင် အမေရိကန် အနေဖြင့် ယင်းတို့၏ မဲများကို ပိုမိုလိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် (၁၅)နိုင်ငံတွင် ပါဝင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် အမေရိကန် နိုင်ငံထံမှ ထောက်ပံ့ငွေ ၅၉ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုရရှိမည် ဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ ထံမှ ၈ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမို ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုလေ့လာချက်က ဆိုထားသည်။ ငွေပမာဏအားဖြင့် တွက်ပြရလျှင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံသည် လုံခြုံရေး ကောင်စီဝင်ဖြစ်လာလျှင် ၄င်း၏ သက်တမ်းအတွင်း ကုလသမဂ္ဂထံမှ ဒေါ်လာ တစ်သန်းနှင့်အတူ အမေရိကန် ထံမှ ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ ၁၆ သန်းကို မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ပဋိပက္ခ အကျပ် အတည်းများ ဖြစ်နေချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်လျှင်မူ ကုလသမဂ္ဂထံမှ ဒေါ်လာ ရှစ်သန်းနှင့် အတူ အမေရိကန်ထံမှ ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ ၄၅ သန်းအထိ မျှော်လင့်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီတွင် အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင် ငါးနိုင်ငံ ပါဝင်ပြီး ၄င်းတို့မှာ ရုရှား၊ အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်နှင့် ဗြိတိန်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ၄င်းအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများသည် ကုလသမ၈္ဂ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဗီတို အာဏာသုံး၍ ပယ်ဖျက် နိုင်ကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဝင် နိုင်ငံများအဖြစ် အခြားနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံ ကိုလည်း နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ရွေးချယ်ကြရာ ၄င်းတို့ကို အမြဲတမ်းမဟုတ်သော လုံခြုံရေး ကောင်စီဝင် နိုင်ငံများ၊ ရွေးချယ်ခံ လုံခြုံရေး ကောင်စီဝင် နိုင်ငံများဟု ခေါ်ကြသည်။ ထို အမြဲတမ်းမဟုတ်သော လုံခြုံရေး ကောင်စီဝင် နိုင်ငံများသည် များသော အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ထိုဆင်းရဲသော နိုင်ငံများအား ငွေကြေး ထောက်ပံ့ပေးနေသော ဂျာမနီ၊ ဂျပန်၊ စပိန်၊ ကနေဒါနှင့် အီတလီ တို့ကဲ့သို့သော ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံ တို့လည်း ပါဝင်ကြသည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရလျှင် ထိုနိုင်ငံအား ပေးသော ပြည်ပငွေကြေး အထောက်အပံ့ များ ပိုမို သိသာစွာ ပိုလာပြီး အဖွဲ့ဝင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားလျှင် ယင်းငွေကြေး အထောက်အပံ့များ ချက်ချင်း သိသာစွာ လျော့နည်းသွားကြောင်း ထိုလေ့လာချက်က ဆိုသည်။ ယင်းသို့ ပြည်ပမှ ငွေကြေး အထောက် အပံ့များ သာသာထိုးထိုး ရရှိလာခြင်းသည် ထိုအထောက်အပံ့ခံ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးနှင့် သံတမန် ရေးရာတို့တွင် ဘက်လိုက်မှုများ ရှိနေသည် ဟူသော အချက်ကို သိသာ ထင်ရှားစေသည်။ ရွေးချယ်ခံ လုံခြုံရေး ကောင်စီ နိုင်ငံ အချို့ကလည်း မိမိတို့၏ မဲများကို ရောင်းစားရန် အလွန်လိုလားနေကြသည်။ ထိုနိုင်ငံ အနေဖြင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီ တွင် နိုင်ငံကြီး တစ်နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားဘက်မှ ရပ်တည်ပေးလျှင် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ရပ်မှ ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီ အရပ်ရပ်ကိုလည်း ရရှိနိုင်သေးသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုနိုင်ငံကြီး တစ်နိုင်ငံသည် UN အေဂျင်စီများ အပေါ် သြဇာ ညောင်းနေ၍ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လေ့လာချက်တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံသည် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ယူနီဆက် ရန်ပုံငွေအဖြစ် ဖြစ်စေ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုများကို အရွေးချယ်ခံရသော နိုင်ငံများအား ပေးနိုင်လျက် ရှိကြောင်း ၊ ယူနီဆက်သို့ ငွေကြေး အများဆုံး ထောက်ပံ့နေသော နိုင်ငံမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ လေ့လာချက် စာတမ်းကို ရေးသားသူများက ကုလသမဂ္ဂ စနစ်ကြီး တစ်ခုလုံးတွင် အဂတိလိုက်စားမှု များရှိနေကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက် ၁၉၄၅ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှ စပီး လုံခြုံရေး ကောင်စီနှင့် နိုင်ငံတကာ သံခင်း ၊ တမန်ခင်း ကိစ္စများတွင် အဓိက အရေးပါသော ဖြစ်ရပ်များကို အခြေခံကာ ၄င်းတို့ စုံစမ်း ထောက်လှမ်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆိုထားသည်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာချက်စာတမ်းကို သုံးသပ်ဖော်ပြထားသည့် အဆိုပါ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှု လေ့လာခြင်းဖြင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီ အတွင်းမှ အမေရိကန်၏ အရှုပ်အထွေးများကို ထင်လင်းစွာ တွေ့ရှိ နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဤမျှဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးအား ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂကို အသုံးချခဲ့သော အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ ရှုပ်ကွက်။ မြုပ်ကွက်များကို သိရှိလောက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့တာကို အာရှတိုက်က ဘယ်နိုင်ငံကမှ မထောက်ခံဘူးလို့ စင်္ကာပူ ၀န်ကြီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်း ကြားသိရပါတယ်။ အလားတူပဲ လာအိုနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံများ ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့တာကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချ ကြောင်း ဝေဖန် ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အာဆီယံအဖွဲ့ဟာ နိုင်ငံအချင်းချင်းအကြား လွတ်လပ်ရေးနဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာကို အပြန်အလှန် လေးစားရေး အခြေခံမူအတိုင်း တစ်သွေမတိမ်း လိုက်နာ ကျင့်သုံးသွားသင့်ကြောင်း လာအိုဝန်ကြီးချုပ်က အာဆီယံထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီမှာ ထုတ် ဖော် ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ ဗိုလ်ကျ အနိုင်ကျင့်ချင်တဲ့ အနောက်အုပ်စုများက ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို သွားပုပ်လေလွင့် အခြေအမြစ်မရှိ စွပ်စွဲမှုတွေလုပ်ပြီး စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု နည်းလမ်းနဲ့ ဖိနှိပ် ရန်စလာတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေအားလုံးကို ရန်စတာ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အေးချမ်းသာယာတည်ငြိမ်မှု နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို တုံ့ဆိုင်းရပ်တန့်သွားအောင် သက်သက်မဲ့ အနိုင်ကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သမ္မတ ကတော် လော်ရာဘွတ်ဒ်ကလည်း သူ့ဟာသူ အေးအေးမနေဘဲ နားမလည်ပါးမလည်နဲ့ နိုင်ငံတော်ကျင်း ပခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ခုနှစ် နှစ်လည် မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲကို ရှောင်ရှားကြဖို့ နိုင်ငံတကာကျောက်မျက် ရတနာ ကုမ္ပဏီများကို တိုက်တွန်းကြောင်း ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူ့စကား ဘယ်သူမှနားမထောင်ပဲ နိုင်ငံပေါင်း (၁၅)နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီ(၁၅၈၃)ခုက ပြည်ပရတနာကုန်သည်ပေါင်း (၂၂၆၁)ဦးလာရောက်ခဲ့ပြီး ကျောက်မျက်ရတနာများ လေလံ ဆွဲဝယ်ယူခဲ့ ကြပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ကနေဒါ ကလည်း သံယောင်လိုက်၊ ဥရောပဘုံဈေး အဖွဲ့ကလည်း ဆရာကြီးရဲ့ အကြိုက်ကို လိုက်နဲ့၊ သူတို့နိုင်ငံ တွေနဲ့ ကမ္ဘာ့ ပုလိပ်ကြီး ဆက်ဆံရေး ကောင်းအောင် မျက်နှာချို သွေးကြပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ မှုတွေ လုပ်လာ ပါတယ်။
ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားတိုင်းစားရေး ၊ ၀တ်ရေး ၊ နေရေး ဖူလုံ လောက်အောင် သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်တွေ၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားတွေ အပြည့်အ၀ ရှိပြီး သားပါ။ ဘာမှ ဂရုစိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ပုလိပ် ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ဆန့်ကျင်ကြ တဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေ အများကြီးပါပဲ။ သူနဲ့အနီးကပ်ဆုံး ကျူးဘားကို နှစ်ပေါင်း(၄၀)ကြာအောင် ပိတ်ဆို့ လာတာ ခုထိ ဘာအောင်မြင် သေးလို့လဲဗျာ။ ကျူးဘားပြည်သူတွေရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု စွမ်းအားက ဒါတွေကို ကျော်လွှား နိုင်ခဲ့တာ အားလုံးအသိပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုတွေ အားလုံးကိုလည်း အရေးကြီးပြီ၊ သွေးနီးကြစို့လို့ တပ်လှန့် နှိုးဆော်ချင်ပါတယ်။
၂၀၀၇ နိုဝင်ဘာ ၂၂
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုလ်ကတ္တားမြို့၌ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြည်သူ ထောင် ပေါင်း များစွာ တို့က အကြမ်းဖက် ဆန္ဒပြမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ပြည်နယ် အစိုးရ မာ့စ်ဝါဒီသမား များက၊ အကြမ်းဖက်မှုအား နှိမ်နှင်းရန် အိန္ဒိယ စစ်တပ်အား အကူအညီတောင်း ခံခဲ့သည်။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒီများ အုပ်စိုးသော၊ အနောက် ဘန်ဂေါပြည်နယ် ၏ အချက်အချာမြို့တော် ကိုလ်ကတ္တားတွင် မွတ်စလင် အများစုပါဝင်သော ဆန္ဒပြသမား ၅၀၀၀ ခန့်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့အကြား ရုန်းရင်း ဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် လူတစ်ဦး သေဆုံး၍ ၃၆ ဦး၊ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး၊ ဆန္ဒပြသမား ၂၀၀ ကျော်အား ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားသည်။ ““ကိုလ်ကတ္တားမြို့ရှိ နယ်မြေလေးခုအား ည ၁၀ နာရီမှ နံနက် ၆ နာရီထိ ညမထွက်ရကာ ဖျူးအမိန့် ထုတ်ပြန် ထားသည်။ အနောက်ဘန်ဂေါပြည်နယ် မွတ်စလင် အများစုနေထိုင်ရာ Nandigram ခရိုင်တွင် အင်ဒိုနီးရှား Slim Group ကုမ္ပဏီက ရေနံဓါတုပစ္စည်းရှာဖွေရန် ဗဟိုချက်မ ဒေသအဖြစ် ရည်ရွယ်ထား သဖြင့်၊ မြေယာ များကို စွန့်လွှတ်ရန် မလိုလားသည့် ရွာသားများက၊ စီမံကိန်းကို စွန့်လွှတ်ရန် အိန္ဒိယအစိုးရအား ဖိအား ပေးသည့် အနေဖြင့်ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဇန်န၀ါရီလ ကတည်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိကရုဏ်း များကြောင့် ၃၄ ဦး သေဆုံးပြီး ဒေသခံများက အိုးအိမ် ထောင်ပေါင်းများစွာ စွန့်လွှတ်ထားရသည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ဒေသခံများကတစ်ဖက်၊ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က တစ်ဖက်၊ အဆိုပါနယ်မြေအား ထိန်းချုပ်ရန် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွား နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“ငှက်ငယ်ဘဝ ပျံသင်စ များလှဖမ်းချင်သူ။ ကြောင့်ကြသွယ်သွယ်၊ ပျိုဖြန်းရွယ် ထို့နှယ်ပမာတူ”
“မိန်းမယောက်ျား မြင်ဖန်များ၊ သနားချစ်ကျွမ်းဝင်၊ ကျွန်ပင်ဖြစ်ငြား၊ မရှောင်ရှား၊ မေ့မှားတတ်ကြအင်”
“ချစ်စိတ် ကြိုက်စိတ်၊ အပျိုစိတ်၊ ဖိနှိပ်မတားလျှင်။စိတ်ပင်ဖျက်ဆီး၊ အပျိုကြီး၊ ပျက်စီးကြဖို့ပင်”
မီးဟူသမျှ ပူလောင်လှ၊ ကျွမ်းရကုန်အစင်။ထိုမီးဆယ်ဆ၊ ချစ်မီးက၊ ပြင်းလှလောင်ချက်ပင်”
ရေလာမြောင်းပေး၊ ပြောဆိုရေး၊ ရှုပေးဆင်ခြင်လျှင်။ မိန်းမပီပီ၊ပျို့ဂုဏ်ညီ၊ ခေါ်မည် ဣနြေ္ဒရှင်”
ဓာတ်ပုံကိုပေး၊ ရယ်သွမ်းသွေး၊ စာရေးတတ်တဲ့ ပျို။ နောက်ဆုံးတစ်နေ့၊ ဒုက္ခတွေ့၊ ကျိတ်၍ ရှိုက်ကာငို။
သာသနာပြု မင်းအမတ်တို့ မည်သည် ပညာရှိသည့် လယ်လုပ်ယောင်္ကျား ကဲ့သို့ ကျင့်ရာ၏။ ပညာမဲ့ လယ်လုပ်ယောင်္ကျားကဲ့သို့ မကျင့်ရာ။ ကျင့်ဟန်ကား စပါးပင်နှင့် ရော၍ ပေါက်ရောက်သော မြက်ကို စပါးအား ရှိစေခြင်းငှာ ပညာရှိ လယ်လုပ် ယောင်္ကျားတို့သည် နှုတ်၍ ပယ်ကုန်သတည်း။ ပယ်ခြင်းကြောင့် စပါးအားရှိ၍ အသီးကောင်းသတည်း။ အသီးကောင်းခြင်းကြောင့် စီးပွားအများ ဖြစ်သတည်း။
ပညာမဲ့ လယ်လုပ် ယောင်္ကျားတို့သည်ကား စပါးပင်နှင့် အသွင်အလားတူသည့် မြက်ကို ခြားနား၍ မသိ။ မသိခြင်းကြောင့် စပါးပင်ကို နှုတ်မည် ခန့်ညား၍ ပေါင်းမြက်ကို မပယ်ထား၏။ မပယ်ခြင်းကြောင့် စပါးပင် ညံ့၏။ အပင်ညံ့၍ အသီးနည်း၏။ အသီးနည်း၍ အရနည်း၏။ အရနည်း၍ မသုံးလောက်။ မသုံးလောက်၍ သူ့မြီတင်၏ ။ သူ့မြီမဆပ်နိုင်၍ သူ့ကျွန်ဖြစ်ရသကဲ့သို့ သာသနာပြု မင်းအမတ်တို့သည် သိက္ခာရှိသည် မရှိသည်။ သာသနာတော်၌ လျော်သည်။ မလျော်သည်ကို သိအောင် ဗဟုသုတမရှိ၍ သာသနာတော် အညစ်အကြေးကို မရှင်းလင်း နိုင်ပချေသော် ပညာမဲ့ လယ်လုပ်ယောင်္ကျား သူ့ကျွန် ဖြစ်ရသကဲ့သို့တည်း စသည်ဖြင့် မဟာအတုလ ဆရာတော်ဘုရားက လောကဓမ္မထုံးပေါင်းတွင် ဆုံးမတော်မူသည်။
တစ်ခါက ဘာစကားပဲ့ပြောပြော ပြည်သူ့အင်အား အကြောင်း မပါလျှင် မပြီးသော နိုင်ငံရေး သမားကြီး တစ်ဦးရှိလေသည်။
တစ်နေ့၌ ထိုနိုင်ငံရေးသမားနှင့် ဇနီး ၊ သားတို့သည် ညအိပ်ယာ ၀င်ကြစဉ်
သား။ အဖေကြီး .. အမေကြီး သားကို ညီမလေး တစ်ယောက် ချက်ချင်း မွေးပေးနော်
အဖေ။ ဟာ … အခု ချက်ချက်ကြီး ဘယ်လိုလုပ်လို့ ရမှာလဲ..
သား။ အဖေကြီးပဲ ပြောတယ်လေ… ပြည်သူ့အင်အားနဲ့ လုပ်ရင် ဘာမဆို ရတယ်ဆို..
အဖေ။ ဟိုက်.. သေရော…..